बलिउडका 'हिरो नं. १' गोविन्दा!
गोबिन्दा भन्नासाथै बलिउडमा सबैभन्दा लोकप्रिय नाममध्ये एक भनेर चिनिन्छ । एक न्यूज पोर्टलका रिपोर्टअनुसार २०२० मा गोबिन्दाको कुल सम्पत्ति १५१.२८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गोबिन्दाको ‘नेट वर्थ’ को मुख्य स्रोत उनको ब्रान्ड एंडोर्समेंट हो । अहिले उनको नेटवर्थ १५० करोड भन्दा बढि भैसकेको छ । ९० को दशकमा उनले आफ्नो सदाबहार अभिनय गरेर बलिउडमा राज गरेका थिए ।
बलिउडमा गोबिन्दले इल्जाम फिल्मदेखि अभिनय को सुरुवात गरेका थिए । त्यसपछि गोबिन्दाले लव, हत्या, जीते है शान से, हम जैसी कई जस्ता फिल्ममा अभिनय गरे । उनलाई फिल्म अफरहरुको अभाव थिएन र उनले निरन्तर एक पछि अर्को फिल्ममा अभिनय गर्दै गए ।
यसैबीच उनले आखें, राजा बाबू, कुली नंबर १, हीरो नंबर १, दीवाना मस्ताना, दुल्हे राजा, बड़े मियां – छोटे मियां, अनाड़ी नंबर १, हसीना मान जाएगी, साजन चले ससुराल र जोड़ी नंबर १ मा काम गरे । उनले त्यति बेला गरेको प्रत्येक फिल्ममा उनको भुमिकालाई दर्शकले खुब रुचाएका थिए ।
उनको अभिनय रुचाउने फ्यानहरूको हौसलाको साथ पनि उनीसँग थियो । दर्शहरुबाट पनि शानदार प्रतिक्रिया आई नै रहन्थ्यो । चलचित्रमा मात्र नभइ उनको टेलिभिजन क्षेत्रमा पनि ठुलो योगदान छ । उनी ‘डांस इंडिया डांस सुपर मम्स’ को सीजन २ मा निर्णायकको भूमिकामा पनि देखिएका थिए ।
आफ्नो उत्कृष्ट अभिनयका कारण गोबिन्दाले चलचित्र क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएका छन् । उनले अहिलेसम्म लगभग १६५ भन्दा बढि फिल्ममा काम गरिसकेका छन् । जीवनको एक काल खण्डमा उनी नेता समेत भए । एक राजनेता , निर्देशक र निर्माता समेत रहेका उनले नामको साथसाथै दाम पनि कमाएका कारण उनलाई हिरो नं १ मानिन्छ ।